Shina: Tantsaha Voaraoka Amin’ny Tany Voadaroka · Global Voices teny Malagasy
Shina: Tantsaha Voaraoka Amin'ny Tany Voadaroka
Voadika ny 16 Jona 2017 12:52 GMT
Lahatsary nalefan'ny olona tsy nitonona anarana omaly tao amin'ny 56.com, tranonkala lehibe indrindra fizarana lahatsary ao Shina no mitondra ny lohateny hoe:
Mampiasa Hery ny Governemanta Mba Handravonana Ny Tany sy Hidarohana Vahoaka
Niantsoantso ny vahoaka hoe: mampiasa hery ny mpandraharaha hakana ny tany, manohana azy ireo ny fitondram-panjakana. Aiza ny lalàna? Aiza ny rariny ??
Ahitana nono tsy misy taty miaraka amin'ny mariky ny fanafihana ny fiafaran'ny lahatsary.
Toa nitranga tao an-tanànan'i Zhangsheliangcai, Kaominina Shangdunbo, Tanàna Fuzhou, Faritanin'i Jiangxi sy tamin'ireo mponina tao amin'ny Vondro-Tanàna 2 ny daroka. Tsy ahitana tantara hafa momba ny fanafihana ny fikarohana ao amin'ny Google, saingy ny fikarohana lalina ao amin'ny Google dia ahitana fanambarana taloha tao amin'ny tranonkalan'ny governemanta Fuzhou izay milaza fa ambony noho ny tamin'ny taona 2002 ny isan'ireo tantsaha voaraoka tao amin'ny kaominina Shangdunbo tamin'ny taona 2001 izay nanao fitakiana voalohany tao amin'ny renivohim-paritany ary avy eo tao Beijing. Nanjary iray tamin'ireo “fari-pitantanana lehibe folo voalohany ao amin'ny faritany” ity tanàna kely ity, natao izany ezaka izany mba hamahàna ny “ady” ary noho izany, tsy nisy intsony ny fitakiana avy ao amin'ny Kaominina Shangdunbo.
Toa fifanandrifian-javatra, ny taona 2002 no nahitana olona nandefa lahatsary tao amin'ny 56.com ary nilaza fa tsy misy fiantraikany intsony ny hetsi-panoheran'izy ireo. Ny fanambaran'ny governemanta, izay toa notantanina tamin'izany fotoana izany tao amin'ny gazety Daily Fuzhou, dia mitondra ny datin'ny taona 2003. Ahitana valiny hafa (sy maro kokoa) ny fikarohana lalindalina ao amin'ny Google, izay tahirin-kevitra taloha avy amin'ny governemantan'ny Tanànan'i Fuzhou, Kaominina Shangdunbo, tamin'ny taona 2004, miantso ireo mpampiasa vola liana, satria voalaza fa tsy afaka nindrana na nanangona ny vola ilaina tamin'izany fotoana izany ny governemanta. Nomena niaraka tamin'izany ny anarana sy ny laharam-pifandraisana.
Ity ny ambin'ny lahatsoratra niaraka tamin'ny lahatsary:
Avy amin'ireo mponina ao amin'ny Vondron-Tanàna faha-2, Tanànan'i Zhangsheliangcai, Kaominin'i Shangdunbo, Tanàna Fuzhou, Faritany Jiangxi. Miorina manodidina ny tanàna ity tanin'ny vondrona ity ary ahitana mponina eo amin'ny 240 mahery fotsiny, miaraka amin'ny tany fambolena 130 mu (8,6 hekitara). Tamin'ny taona 2000, 80 mu mahery tamin'ity tany ao an-tanàna ity no nalaina hanamboarana Tranobem-panjakana Distrika Linchuan. Ary 10 isanjato monja tamin'ny onitra nakàna ny tany no naloa taminay. Manan-kery manomboka ny taona 2000 hatramin'ny 2002 ny fifanekena tamin'ity fakàna tany ity. Dimy taona izay no nahalany andro azy, tsy manan-kery intsony ny fifanekena. Tsy mbola nalòa ny ambiny tamin'ny fanonerana ny fakàna ny tany hatramin'izao, notapahana ny loharano mamatsy rano ny tany fambolen'ny tantsaha. Tsy afaka mamboly, tsy namokatra intsony ny tany ary goavana mahatsiravina ny fatiantoka nahazo anay. Nanao fanoherana goavana ireo mponina tao an-tanàna. Avy eo, tamin'ny 8 maraina tamin'ny 20 Jolay 2007, nitondra olona 150 mahery ny governemantan'ny distrika, tsy nahazo fankatoavana avy amin'ny solontena ara-dalànan'ny Vondrona akory, nanomboka nanao fanorenana an-keriny tao izy ireo. Niezaka nitady marimaritra iraisana ny Vondrona, saingy tsy vitany hoe tsy nihaino fotsiny izy ireo, fa nanomboka nandrahona tamin-kerisetra olona, ary nidaroka azy ireo. Ka nisy ireo naratra marobe, sy niharan'ny ratra goavana ka nahatonga ny fahatezeran'ny mponina. Ankehitriny, tsy manana tany na dia iray dia aza ny vondrona hambolena. Nanano-sarotra ny fiveloman'ireo olona 240 tao amin'ny vondron'ny tanàna izany. Ao anatin'ny fanantenana hampiroborobo sy hitakiana ny rariny, miantso ireo olona malala-tanana rehetra izahay mba hanohana anay amin'ny fanatsarana ny fari-piainana ao amin'ity vondrona ity. Manantena izahay fa handray ny andraikiny ireo sampam-panjakana tompon'andraikitra!
Misy ihany koa tahadikan'ity lahatsary ity ivelan'ny aterineto raha sendra voafafa ao amin'ny 56.com izany.